Fironana SPA 5 ho an'ny 2019 naseho
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Litoania » Fironana SPA 5 ho an'ny 2019 naseho
Ny fironana SPA mahaliana indrindra amin'ny taona 2019 dia vaovao tsara ho an'ny natiora sy ny mpitia.
Tao anatin'izay taona lasa izay, ny indostrian'ny fahasalamana dia nitombo haingana kokoa noho ny hatramin'izay. Mandritra izany fotoana izany, ny fifantohan'ny SPA dia niova avy tamin'ny hatsarana ho amin'ny fiainam-panovana ankapobeny, namorona fironana vaovao hitarika izao tontolo izao SPA amin'ny 2019.
Eoropa Avaratra - laharam-pahamehana amin'ny fanavaozana SPA - dia efa nandray ny fironana sasany amin'ny taona ho avy.
"Tamin'ity taona ity, nandinika ny fironana SPA" miverina amin'ny natiora "isika. Matetika isika no maheno amin'ny vahinintsika fa ny safidin'ny hotely SPA dia miankina amin'ny akaiky ny ala sy ny karazana fitsaboana voajanahary azony atolotra. Mino izahay fa amin'ny taona 2019 ity fironana ity dia hitombo ary ny olona dia maniry ny natiora ho loharanom-pahasalamana, na amin'ny manodidina azy ireo na amin'ny fitsaboana azy ireo ", hoy i Kęstutis Ramanauskas, Talen'ny Toeram-pitsaboana ao amin'ny Druskininkai, tanàna litoanianina SPA izay manana fomba amam-panao fahasalamana efa an-jato taonany.
Raha ny filazan'ny SPA sy ireo manam-pahaizana momba ny fahasalamana ao Druskininkai, ireo no fironana dimy lehibe antenain'izy ireo hahita fitomboan'ny lazan'ny taona 2019:
Mandeha amin'ny SPAcation lava. Ny fironana vaovao dia ny fialan-tsasatra mankany amin'ny hotely SPA ary mankafy fitsaboana isan'andro. Manome fonosana fialantsasatra sy fifanarahana tsara indrindra ho an'ireo vonona hijanona mandritra ny andro maromaro ny foibe SPA, mitaona olona maro hanandrana fomba vaovao. Ny SPAcation dia mety ahitana fialam-boly mavitrika, fonosana fanatanjahan-tena mampiroborobo ny fahasalamana ary traikefa fisakafoanana tena izy. The Aman Spa at Aman Le Melezin amin'ny French Alps dia manolotra fonosana fandefasana ski manokana, fotoam-pialan-tsasatra alohan'ny fanaovana ski, fisakafoanana ary fitsaboana SPA ho an'ireo mijanona ao amin'ny toeram-pivarotana 3 ka hatramin'ny 6 andro. Hotel Kalevala any Failandy dia manana fonosana mifono fonosana, saunas ary fandroana miampy fitsangatsanganana safari amin'ny snowmobile sy hetsika hafa mahafinaritra.
2. Fandroana ala. Shinrin-Yoku dia fanao japoney amin'ny fandroana ala fantatra hamoha ny hery miafina amin'ny ala iray ary hampiasa azy io amin'ny fitsaboana sy ny fanasitranana. Ity fitsaboana ity, izay misy ny fandehanana an-tongotra lavitra any anaty ala, dia antenaina ho lasa malaza manerantany amin'ny taona 2019, satria ny olona dia manatona fomba haingana kokoa sy feno kokoa amin'ny fahasalamany. Ny fandroana ala dia voaporofo fa mampihena ny haavon'ny kortisol, manamaivana ny fahaketrahana, manala ny fihenjanana ary misy fiatraikany tsara amin'ny tosidra. Mandehandeha matetika ny mpikarakara ala any Japon Valan-javaboary Chubu-Sangaku izay ahafahan'izy ireo misafidy na hanitrika tanteraka ny natiora na hanambatra azy amin'ny fialam-boly ao amin'ny iray amin'ireo toeram-pialan-tsasatra sy foibe lohataona mafana. Druskininkai, tanànan'ny SPA any Litoania, dia fantatra amin'ny anarana hoe "havokavok'i Lituania" noho ny ala hazo kesika majika manodidina ny tanàna. Ny mpitsidika an'i Druskininkai dia manana fotoana betsaka hanaovana fitsaboana ala - afaka mandeha bisikileta amin'ny alàlan'ny ala kesika ianao, mankafy ny valan-javaboary ala UNO na manamaivana ny adin-tsaina amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana Dineika wellness park. Ny tanàna SPA dia miorina lavitra ny faritra be tanàna, ary ny fitsaboana ala fandroana ala dia iray amin'ireo hetsika malaza indrindra ao Druskininkai.
SPA ho an'ny ankizy. Nandritra izay taona vitsy lasa izay dia nanaraka ny ohatry ny ray aman-dreniny ny ankizy ary nanaiky ny SPA - ary tsy hijanona izany. Araka ny Fikambanana SPA iraisam-pirenena, mihoatra ny antsasaky ny efa ho 14,000 SPA any Etazonia no manolotra fonosana ho an'ny fianakaviana, ny tanora na ny ankizy - ary i Eropa dia manaraka akaiky ny diany. Ny faritra ankafizin'ny ankizy dia mandray ny ivon-toeran'ny SPA - manomboka amin'ny saunas ho an'ny ankizy manokana ka hatramin'ny fitsaboana sira. Ny fomba fanao isan-karazany dia natao hampifaliana ny ankizy mandritra ny fotoana mahasalama azy ireo. Na ny fomba fanaovana hatsarana aza dia azo ampifanarahana amin'ny filan'ny ankizy. Any Austria, Grand Resort Bad Ragaz dia tranon'ny faritra SPA izay ahafahan'ny olon-dehibe mizara fomba tsara sy tsara tarehy amin'ny ankizy. Ny menan'ny SPA an'ny zanany dia misy fanorana tantely sy sôkôla, manicure ary fomba 'tongotra falifaly'. Ny fofonaina, ny lava-bato, ny apitherapy, ny saron-tarehy ary ny fandroana voankazo - ireo fitsaboana maharitra ireo dia tafiditra ao amin'ny programa SPA ho an'ny ankizy ao amin'ny TAOR-Karpaty, trano fandraisam-bahiny Okrainiana sy toeram-pitsaboana.
4. Malaza indray ny hafanana sy ny fotaka. Ny fandriana amam-behivavy, ny fitsaboana fotaka, ny saotra - ny fomba fialana sasatra sy ny fanarenana izay efa an-jatony taona lasa izay - dia nanjary nalaza satria nahita ny tombontsoa ara-pahasalamany ny olona. Ireo ivon-toerana SPA vaovao dia mamadika ireo fomba fanao ireo ho lasa traikefa mahafinaritra sy miavaka amin'ny alàlan'ny famenony azy ireo amin'ny zava-maniry maniry eo an-toerana, menaka manitra ary kosmetika avo lenta. Ho an'ny fombafomba fandriana hammam nentim-paharazana sy ny sauna mihoatra ny 20, ny mpitia SPA dia tokony mankany amin'ny toeram-pialamboly sy tobim-pahasalamana Druskininkai Aqua, mifandray amin'ny FLORES Hotely sy SPA ary toeram-pitsaboana Druskininkai. Ny foibe dia manome ny fomba faran'izay betsaka indrindra izay mampifangaro ireo akora natoraly sy ny fitsaboana nentim-paharazana - ny zava-drehetra dia manomboka amin'ny fampiharana fotaka ara-pahasalamana hatramin'ny fombafomba volamena. Saunas infrared, izay tsy manafana ny rivotra fa manafana ny vatana ao anatiny, dia mitombo laza ihany koa. Eto dia miditra lalina kokoa ny hafanana ka miteraka detoxification mahery vaika, fialam-boly, fanatsarana ny fihodinan'ny hoditra ary hoditra madio. Kulm Hotel St. Moritz any Suisse dia misy kabinetra infrared 30-37 C manokana.
Metaly sy vato sarobidy ampiasaina amin'ny fitsaboana. Hita indray ny kalitaon'ny metaly sy vato sarobidy - toy ny volafotsy, volamena, perla ary andramena. Hampiasana bebe kokoa amin'ny fomba fitsaboana sy hatsaran-tarehy izy ireo. Ny fandroana ion misy volafotsy dia voalaza fa manatsara ny fahasalamana sy ny lokon'ny hoditra. Manala ny vatana sy ny saina ihany koa izy ireo, mampihena ny havizanana ary mamerina ny fandanjana angovo. Amber dia mamoaka asidra amber ho an'ny tontolo iainana rehefa tonga ny maripana mety, misy fiatraikany amin'ny rafi-pitabatabana ary manamaivana ny adin-tsaina. Ny volamena dia mampamirapiratra ny hoditra ary afaka mitsabo aretin-koditra sy otrikaretina isan-karazany aza noho ny kalitaon'ny bakteria. Na any amin'ny toeram-pialan-tsasatra Tiorka mora vidy aza, toy ny Aqua Fantasy ao Izmir, ny olona dia afaka manandrana fanorana miaraka amin'ny vovoka volamena sy menaka manitra. Amber - antsoina matetika hoe volamena Litoania - dia be mpampiasa amin'ny fanao amin'ny fahasalamana any Eropa Atsinanana. SPA ivon-toerana any Litoania toy Grand SPA Lietuva manasa ny vahinin'izy ireo hanandrana fanorana amber, fampiharana ary fikosehana. Aorian'ireo fomba fiasa mamelombelona dia afaka manandrana dite amber mihitsy aza izy ireo - zava-pisotro mameno ny vatana amin'ny hery mafana an'ity vato ity.
Sheikh Mohd. Parvez nantsoina hoe GM tao amin'ny Shravanthi Sarovar Portico Bengaluru